Manakaiky ny orinasa Silent drill - Mpanamboatra, mpamatsy mpitrandraka ao Shina
Product Features X8 Silent Drill amin'ny alàlan'ny fitaovana enti-mandray feo, feo ambany, mora tsikaritra. Kely, azo entina, afaka miasa amin'ny toerana kely ianao ao anatin'ny sarotra. Miaraka amin'ny peratra jiro LED ho an'ny fanadihadiana sy fandrefesana ny tontolo iainana lalina. Tsotra, maivana ary malefaka, haingam-pandavahana, torque ary toetra hafa. Ny tanjona lehibe sy ny fampiharana X8 Silent Drill dia ampiasaina amin'ny hery miaramila sy polisy manohitra an-keriny, fanadihadiana manohitra ny fampihorohoroana ary missio manokana hafa ...
Silill Drill miaraka amina motera roa
1.Fampidirana C8 indroa moto tsy mandeha ho azy dia fitaovana fandavahana feo ambany. Mandritra ny fanatanterahana izany asa izany dia afaka mandavaka lavaka ao anaty rindrina amin'ny alàlan'ny fandefasana herinaratra mangina ny mpitandro ny filaminana nefa tsy anaovan'ny olon-dratsy fanadihadiana ary avy eo mampiasa fitaovana matihanina bibilava, sns.) Mba hijerena ny zava-misy ao an-trano, amin'ny alàlan'ny rindrina indrindra mba hahitana ny fihetsiky ny mpiasa ao amin'ny efitrano. Mahatonga ny polisy hiditra haingana sy ara-dalàna ny fahavalo, ampiasaina amin'ny karazana ...
Boribory mangina C7
Overview C7 akaikin'ny fandavahana mangina dia antsoina koa hoe low drill. t dia ho an'ny fampihorohoroana, famonjena ny takalon'aina na fanaraha-maso. Ny fandavahana mangina akaiky dia afaka mandavaka amin'ny rindrina nefa tsy misarika ny sain'ny mpanao heloka bevava ary mampiditra ny famotopotorana ny mason'ny bibilava hijerena ny zava-misy. Ny fitaovana dia eo am-pelatanana. Mora ny manangana sy miasa. Ny rafitra napetraka iray manontolo dia napetraka ao anaty tranga mitondra azy izay naparitaka haingana sy miasa mora foana. Misy maodelin'ny propulsion 3, ao anatin'izany ny rafitra mandrisika tena, ma ...